Sudan - BBC News Somali
Posted at 1:36 14 Agoosto 20211:36 14 Agoosto 2021
Waa maxay sababta Sudan u aqbashay in ay Al-Bashiir dhiibto?
Wargeysyada Carbeed ayaa ka falceliyay go'aanka Sudan ee ay ku shaacisay in ay u gacan gelinayso Maxkamadda Caalamiga ah ee Dembiyada eedaysaneyaasha loo haysto falalka ka dhacay gobolka Darfur oo uu ka mid yahay madaxweynihii hore Cumar Al-Bashiir.
Posted at 11:21 22 Juunyo 202111:21 22 Juunyo 2021
Posted at 15:12 5 Juunyo 202115:12 5 Juunyo 2021
Wargeysyo Carbeed ayaa ka waramy suurtogalnimada "weerar" ay Masar iyo Sudan ku duqeeyaan biyo-xidheenka Itoobiya marka la bilaabo in mar labaad lagu weeciyo biyaha si loo buuxiyo haradiisa. Waxaanay qaarkood ku nuuxnuuxsadeen muhiimada ay leedahay in la gaadho heshiis wax dabraya oo dhex maraya dhinacyada oo dhan.
Posted at 12:39 23 Maajo 202112:39 23 Maajo 2021
Posted at 1:23 5 Maajo 20211:23 5 Maajo 2021
Itoobiya ayaa gaashaanka u daruurtay sheegashada Suudaan ay ku sheegatay deegaanka Benishaangul-Gumuz oo laga dhisayo biya xireenka weyn ee Itoobiya.
Posted at 11:51 2 Abriil 202111:51 2 Abriil 2021
Kala saaridda dowladda iyo diinta oo khilaaf ka abuurtay baraha bulshada Suuudaan
Heshiiskaan ayaa baraha bulshada ka abuuray kala qaybsanaan baahsan oo la xiriirta waxa ka dhalan kara
Posted at 9:12 2 Abriil 20219:12 2 Abriil 2021
Abiy Axmed iyo saddex sano: Nabaddoon lugaha la galay dagaal dunida cambaareysay
Raa'isal wasaare Abiy Axmed oo seddex sana ka hor qabtay talada dalka Itoobiya iyo tallaabbooyinka uu qaadayba waxay dalkaasi u horseedeen isbeddelo dhowr ah inuu ku tallaabsado, balse isbeddellada waxaa hareeyey dhiigga shacabka oo maalin walba daadanaya, sicir barar iyo xubna mucaarad ah oo xabsiga loo taxaabay.
Posted at 10:14 29 Maarso 202110:14 29 Maarso 2021
Suudaan waxay isku mawqif ahaayeen Itoobiya, gaar ahaan xilligii dowladdii Al-Bashiir. "Haatan waxaa dalka ka jirta dowlad rayid ah. Labada hoggaamiyena isku mowqif ma ahan."
Posted at 2:09 7 Maarso 20212:09 7 Maarso 2021
Khilaafka ku saabsan biyo xireenka wabiga Niil ayaa muddo soo jiitamayay,iyadoo hadda Itoobiya ay bilaabayso buuxinta biyo xireenka bisha toddobaad ee sanadkaan
Posted at 9:25 3 Maarso 20219:25 3 Maarso 2021
Bog 1 of 7